sidee baa ugeli karaa ama uheli karaa asxaab kujira webka ?
Mawduucyadaada : 1
ka Qeeb Qaadashaadaada : 1
Is Diiwaangalintaa : 26/12/2010
Subject: sidee baa ugeli karaa ama uheli karaa asxaab kujira webka ? Sun Dec 26, 2010 9:57 pm
walaal aniga waaan cusubahay markaa sidee baa ugeli karaa ama uheli karaa asxaab kujira webka ?
Subject: sidee baa ugeli karaa ama uheli karaa asxaab kujira webka ? Sat Jan 01, 2011 4:31 am
walaal marka hore ku soo dhawoow shabakada
walaalo policy-ga ama siyaasada webka ayaa waxay tahay Personal information aan loo soo bandhigin puplic marka adigoo naga raali ah dadka kaliya aa arag kartid waa kuwa mawduuca soo qora , kuwaan qorin way kaa qarsanaanayaan.
aad iy aad ayaan kuu soo dhawayneenaaa waxaana kaa sugaynaa ka qeeb qaadasho active ah.